Atleetonni Itoophiyaa dhiiraa-dhalaan maaraatoonii Fraankifart injifatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Atleetonni Itoophiyaa dhiiraa-dhalaan maaraatoonii Fraankifart injifatan
Dubatoonni keenya 1ffaa hanga 3ffaa ta'uudhaan xumuran
Kallattii lameeniinuu, wolmorkii dhiiraa fi dhalaanis, atleetonni Itoophiyaa maaraatoonii Fraankifart moo’achuudhaan gootummaa isaanii akkuma baratame addunyatti agarsiisaniiru.
Wolmorkii fiigicha maaratoonii worra dhiira jiddutti ta’een atleet Siisaay Lammaa morkii cimaa atleetota Keeniyaa irraa isa mudate irra aanuudhaan abbaa meedaaliyaa worqee ta’uu danda’eera. Siisaay Lammaa woldorgommii maaraatoonii magaalaa Fraankifarti, Jarman, kan xumure sa’aa 2:06:26’tti. Siisaay, fiigicha kana irratti, sa’aa isaa kan kana dura galmeessisee tures sekondii 40 fooyyesseera. Fiigicha booda yaada laateen,’ moo’achuu kootti baay’ee gammade. Karoorri koo sa’aa 2:05’tti galuuf ture,’ jedhe Siisaay.
Siisaayiin hordofanii, lammafaa fi sadaffaa ta’anii kan galan atleetota Keeniyaati.
Kan dirree dubartiitti ta’e adda jechuun ni danda’ama. Dubartonni keenya tokko namaa meedaliyaa mormatti akka diratuuf hin hayyamne. Atleetonni Itoophiyaa 1ffaa hanga 3ffaa ta’uudhaan meedaaliyaa qophaaye hunda gargara qooddatan.
Maaraatoonii Frankifart kana atleet Gulummee Tolasaa sa’aa 2:23:12 galuudhaan moo’atte. Atleet Dinqinesh Maqaashii fi Kureen Jaalalaa wolduraa duubaan 2ffaa fi 3ffaa ta’uudhaan xumuran. Baga gammaddan!
Previous articleHirriba gayaa dhabuun rakkoo dhibee sukkaaraafi onneetiif nama saaxila
Next articleItoophiyaan jaarraa addunyaan quufte keessatti maaliidhaaf beelofti?